Ama-Postcards nezithombe ku-Palm Sunday 2018 ngokuhalalisela - Okuhle kunazo zonke ngeSonto lePalm kubafundi
Iholide lesonto leSonto lePalm liqhubeka ngesonto ngaphambi kwePhasika. Kulolu suku kuyisiko ukuhlukanisa amagatsha we-vertebral, athathelwa amagatsha esundu. Ngokusho komlando, kwakuyilolu suku ukuthi ukufika kukaKristu eJerusalema kwaphela. Siyakuhalalisela izihlobo nabangane ngalolu suku olungcwele kungaba izifiso zomuntu emhlanganweni, besebenzisa amakhadi amahle. Sithathe izithombe ezinhle kakhulu ngokuhalalisela kanye nemibhalo. Zingathunyelwa ngosuku lweholidi ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi, izithunywa ezisheshayo noma ama-mms. Ama-postcards amahle nezithombe ku-Palm Sunday 2018 kuzosiza ukuveza uthando nenhlonipho kubathandekayo.
Amakhadi okubambisana okuqala ku-Palm Sunday 2018 - ukukhethwa kwezithombe
Sihalalani izihlobo zakho, abangane kanye nozakwabo ngosuku lweSunday Palm ngeposi. Zingafaka phakathi izifiso evesini nakumaprosethi, imibhalo. Izithombe ezinhle zingathunyelwa kanye nokumomotheka okunamatheksthi noma izinsimbi. Ukuthola amakhadidikhadi amahle ngokuhalalisela iholidi lePalm Palm nge-208 lingatholakala ekukhethweni kwethu okulandelayo.
Ukukhethwa kokubingelelwa kwangempela emakhadini okuhlonishwa ngeSonto lePalm ngo-2018
Amakhadi okubingelela amahle eholidini leSonto lePhalamende lika-2018 angenziwa ngezinye izifiso. Ungabathumela kusukela ekuseni kakhulu. Ukubingelela okujabulisayo kuzonikeza umuzwa omuhle kakhulu kulowo owamukelayo iholide lonke.
I-postcards engcono kakhulu ngeSonto le-Palm 2018 labafundi baseKlasini - ukukhethwa kwezithombe
Iningi labasebenzisi be-social network. Ebusuku beholide lesonto, izingane ezifunda nabo zikhetha amakhadikhadi amahle amahle. Ngakho-ke kubo siqoqe izithombe ezinhle kakhulu ngezifiso. Izithombe ezimhlophe ezinamahlamvu esundu, izingane zizosiza ukuhalalisela ngokweqile izihlobo nabangane babo. Ukudlulisela la maphudikhadi ngosuku olungcwele lweSonto lePalm ngo-2018 kulabo abafundela ekilasini bangaba namavesi okuthokozisa kanye ne-prose.
Ukukhethwa kwama-postcard amahle kakhulu eholide leSonto lePalm ngo-2018 kwabakwaGrade
Ngokuba ukuhalalisela kwangempela kwabantu abaseduze e-Odnoklassniki amakhadi anombala anembala futhi akhanyayo aphelele. Izithombe ezinamazwibela, imikhonzo ingathunyelwa kwamanye amanethiwekhi omphakathi. Uma befisa, bangakwazi ukwesekwa ngemikhonzo yomculo noma imibhalo.
Izithombe ezinhle ku-Palm Orthodox ngeSonto lika-2018 - ukuhalalisela kuma-postcards nevidiyo
Siyakuhalalisela amakholwa ase-Orthodox ngeSonto lePalm ngeposi namakhadi amahle. Zifaka izifiso ezinhle nomculo womculo. Izithombe ezithandekayo namakhadi ombukiso weSonto lePalm lika-2018 liphelele ukuthumela emndenini nakubangane.
Ukukhethwa kwezithombe ezinhle ngokuhalalisela ngeSonto lePalm lika-orthodox ngo-2018
Kubafundi bethu, sathola amakhadididi enhle kakhulu futhi anomusa ngokuhalalisela ngeSonto lePalm ngo-2018. Ngosizo lwabo, bangahalalisela abangane nabangane abasondelene neholide eliqhakazile lesonto. Sincoma ukwengeza izithombe zakho ezithombeni.
Amakhadi okubingelela amavidiyo ngokuhlonipha i-Orthodox Palm ngeSonto 2018
Ukuhalalisela okuhle, kuhambisane nezithombe ezithandekayo nomculo, kuhle ukuthumela ngosuku lweSunday Palm. Uma ufisa, amakhadi wevidiyo angase ahlanganiswe nezinye ukuhalalisela ezithombeni, ama-prose alungile, amavesi.
Izithombe ezinhle kunazo zonke kwiPalm ngeSonto lika-2018 ngemibhalo eqoshiwe - ukukhethwa kwamaphostakhadi
Izithombe esizikhethile ngezinkomba zizobe zihalalisela ngokuphelele zonke izihlobo. Ama-postcard enhle futhi anemibala anemifanekiso yamathempeli, amahlumela esundu ansiza ukuhalalisela izihlobo nabangane. Khetha izithombe ezinhle kunazo zonke ze-Palm Sunday Festival ka-2018 kuqoqo lethu elilandelayo.
Ukukhethwa kwezithombe ezinhle kunazo zonke ngeholidi lePalm ngeSonto ngo-2018
Ekukhetheni kwethu kwezithombe ezinhle, abafundi bazokwazi ukuthola izithombe ezikhanyayo nama-postcard avintage. Ngemifanekiso engavamile, akunzima ukubingelela izihlobo nabangani ngeSonto lePalm lika-2018 ngendlela yokuqala.
Ukuncoma okujabulisayo nokufisa kuma-postcards kuhle ukuthumela edilini elingcwele leSonto lePalm. Kubafundi bethu, sikhethe izithombe zanamuhla nezokuvuna. Ama-postcard amahle kakhulu nezithombe ku-Palm Sunday 2018 kuzokusiza ukuhalalisela bonke abangane bakho ngendlela yokuqala. Zisuswa yizifiso eziqotho nemibhalo eqoshiwe. Futhi, abafundi bangathumela amakhadi wevidiyo kubathandekayo babo. Zihlanganisa ukuhalalisela ngomusa futhi zihambisana nomculo omuhle.
Imidwebo yesinyathelo-nge-sigaba esihlokweni esithi "I-autumn" enkulisa kanye namamaki 1-5 - master amakilasi ngepensela nopende
U-Dmitry Shepelev ukhulume ngokubiwa kwezimali zikaRusfond ngumndeni wakwaFriske
Ikhekhe elingenayo i-apula nesinamoni
Amaqanda aqhephukile ngesinkwa
Kulula yini ukufundisa ingane indlela yokuziphatha kahle emgwaqweni?
Isaladi kusuka kulabo abadla izinyoni
Ungakhohlwa kanjani uthando lokuvakasha
C kunokugqokisa amabhuzu e-ankle ngo-2018: izithombe eziphathekayo zansuku zonke!
Piadina namazambane, ithanga ne-ricotta
Yini engabangela ukungabi nokulala okungapheli
Kissel kusuka ku-sorrel
I-Henna yezinwele: izakhiwo eziwusizo kanye nezindlela zokupheka zezimoto ezihamba kahle ekhaya
Isaladi kusuka ku-watermelon no-utamatisi